Manchastar lamaan, Cheelsiifi Baayer Muniik injifatan. Arsenaal qabxii gate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Manchastar lamaan, Cheelsiifi Baayer Muniik injifatan. Arsenaal qabxii gate
Taphoota Primer Liigii Ingiliiz guyyaa har’aa garee garagaraa jiddutti ta’een gareen Cheelsii, Manchastar Yunaaytidii fi Manchastar Siitiin injifannoo goonfatan. Gama biraatiin gareen Arsenaal, West Broomich fi Sawaansii Siitii injifatamuun isaanii beekame.
Taphni guddaan guyyaa har’aa jaallattoota kubbaa miilaatiin adunyaa irratti hedduu eegamee fi daawwatame tapha garee Arsenaalii fi Manchastar Yunaayitid jiddutti geggeeffameedha. Taphni isteediyoomii Emireetis keessatti geggeeffame injifannoo Manchastar Yunaayitidiin goolabame. Gareen Manchastar goolii daqiiqaa 56ffaa (Arsenaal ufirratti galche) fi daqiiqaa 85ffaa irratti Rooniin laakkofsiiseen. Gareen Arsenaal dhuma irratti, daqiiqaa 90ffaa, goolii takka galchus Manchastariin wolqixxaayuus ta’e injifachuu hindandeenne. Dirree isaa irratti injifatamee, mataa gadi qabatee bayuun dirqii itti ta’eera.
Tapha garee Cheelsii fi West Broomich jiddutti geggeeffameen milkiin kan Cheelsii ture. Cheelsiin goolii Diyaagoo koostaa fi Hazaard laakkofsiisaniin 2 – 0 morkataa isaa injifachuu danda’eera. Manchastar Siitiinis, bifuma wolfakkaatuun, 2 fi 1 garee Sawaansii Siitii qaanfachiiseera. Goolii Manchastar Siitii injifannoo gonfachiiste Yaayaa Turee ture daqiiqaa 62 irratti kan galche.
Injifannoon har’aa Cheelsiin hooggansa primer Liigii ingiliiz qabxii 30 akka jabeeffatu isa dandeessiseera. Gareen Saawuz Hamton qaxii 25 lammaffaa yoo ta’u, Manchastar Siitii fi Manchastar Yunaaytid (taphata tokkotu isaa hafa) 3ffaa fi 4ffaa, Arsenaal taphni tokko isaaf hafaa 8ffaa dha. Sarjiyoo Agu’eroon goolii 12 lakkofsiisuudhaan taphattoota hunda dursaa jira. Diyaagoo Koostaan goolii 11 itti aanee jira.
Taphoota Bundas Liigaa biyya Jarmaniitti geggeeffameen garee Baayer Muniik kan dhaabu waan jiru hinfakkaatu. Baayer Muniik 4 -0 kan garee Hoofenhaayim tortorse. Garee Hanoovar 1 -3 garee Baayer Livarkusaniin rukutameera. Gareen Boorushiyaa Dortimund 2-2 gareen Pederboorniin gargar bayan.
Gareen hedduun isaanii hanga ammaatti tapha 12 kan taphatan yoo ta’u, Baayer Muniik qaxii 30 mataa Bundas Liigaa irra jira. Boorushiyaa Dortimund, gareen woggoota dabran morkataa cimaa ture, sadrkaa 15ffaa irra taa’uuf dirqameera.
Previous articleRukuttaan Al Shabaab Keenyaa keessatti lubuu nama 28 galaafate
Next articleManni cuunfaa Oromoo New York keessatti beekkamiinsa argate